Duuti godaantotaa hojiin UN Liibiyaa jiru laafuusaa mul'ise - BBC News Afaan Oromoo
Duuti godaantotaa hojiin UN Liibiyaa jiru laafuusaa mul'ise
31 Adooleessa 2019
Waggaa lama keessatti yaalii sodaachisaa biyyoota sadii keessa qaxxaamuruuf taasisee fi namoota godaantota seeraan ala daddabarsaniin bitamee gurguramee, akkasumas galaana Meditiraaniyaanii gubbaattii balaa bidiruu isaanii mudate erga dandamateen booda dhumarratti Mohaammad abdii kute.
Haadha warraa lammii Somaalee kanaa kan taate, shamarreen ganna 21 Leylaan, guyyaa abbaan warraa ishee ibidda ofitti qabsiisee of ajjeese ni yaadatti.
Liibiyaa keessatti "yeroo sadi na gurguratan"
Dararamni lammiilee Itoophiyaa Liibiyaatti hanga yoomiitti?
Mohaammad tarree baqattootaa Dhaabbatni Biyyoota Gamtoomanii galmeessee harkaa qabu keessa maqaan isaanii akka hin jirre dhagahuutu ofirratti akka murteessu godhe. (maqaan namoota lamaanii nageenya isaaniif jecha jijjiirameera)
Buufata baqattootaa harka milishoota mootummaa Liibiyaa deeggaran keessa jiru,Triq al-Sikka jedhamurraa gara bakka UN deeggarsa namoomaa kennuutti dabarfamuutti turan.
''Itti aanee namoota bakka sana gadhiisan keessa akka jirru nutti himamee ture. Tartiibni maqaa haaraan dhufnaan mohammad dhaqii ilaali naan jedhe. Maqaan keenya keessa hin turre. Ammaas isa itti aanutti dabarfamne jedheen itti hime.
''Namoonni hedduun nu booda dhufan deemaniiru. Mohaammad baayyee aareera, bitaas itti galeera. Salaatni galgalaa gahuuf yoo jedhu dha wantichi kan ta'e. Ibidda ofitti qabsiise. boba'aa ofitti naqe ibidda ofitti qabsiisuu isaa natti himan.''
'Bakkicha gadhiisuuf sagantaan bahee ture'
Lixa Liibiyaattiitti buufataale baqattootaa mootummaan to'ataman 12 keessa tokko kan ta'e buufatni kun bakka hedduu rakkisaa akka ta'e Leeylaan ni dubbatti.
''Mana dhiphoo keessatti dubartoota biroo 50 waliin jiraanna, konteenarri akka mana fincaaniitti tajaajiltus jirti''
''Nyaata xiqqoo arganna, bishaan gahaan hin jiru. Namoonni hedduun daranyoo sombaan dhibamu, kan harka koorratti lubbuun darbes jiru. na reebu ture, elektirikiin nu dararaa turan'' jechuun Leeylaan gaazexessituu BBC kan gaanfa Afrikaatti himteetti.
Image copyright via Giulia Tranchina
Abbaan Warraa ishee Mohaammad, Mana yaalaa erga gahee lubbuun darbe.
Guyyaa Mohaammada ibiddaan of ajjeese qondaalli UN tokko buufaticha daawwatee ture jedha Komishinii Olaanaa Baqattootaa dhaabbatichaa.
Hiraara biyya namuu keessaa baqachuu barbaadutti qabamanii hafuu
''Yoo xiqqaate bakka torbatti gurgurameera''
''Baqataa of ajjeesee fi haatiii warraa isaa ji'a itti aanuu bakka kanaa baahuuf sagantaan qabameefi tures'' jedha UN.
Haalli hojii dhaabbatichaa du'aatii fi dararaa akkasiif sabab ta'aa jira jechuun qeeqa irratti ka'uu, haala hammaataa jiru sirreessuuf hojjechaan jira jechuun fashaleessa.
Haata'u malee hojjettootni gargaarsaa kanatti walii hin galan, kanarraa kan ka'ees gareeleen gargaarsa namoomaa kennan lama, UNHCR waliin hojjechuu dhaabaniiru.
Mohaammad fa'a akkamiin biyya isaanii bahan?
Cimdiiwwan kun bara 2016 al- Shabaab jalaa baqatanii, harka daddabaristoota seeraan alaa Liibiyaa bu'an.
Banii Waliiditti walitti dhukaasa daddabarsitootaa gidduutti mudate jalaa bahanii Lixa Liibiyaa gahan. Achiis miliqanii baqattoota biroo 140 waliin bidiruun galaana meditiraaniyaanii qaxxaamuruuf yaalan.
Bidiruun kun boba'aa fixxee, to'annoo eegdota qarqara galaanaa jala galan. Achiis humnaan gara Triipolii fidamanii, hojjetoota UN wiiln walarganii, boodas gara buufataale baqattootaatti dabarfaman.
Ittigaafatama baqattoota kunuunsu kan qabu UNHCR, eegdota daangaa qarqara galaana Liibiyaa waliin hejjechuu isaaf hojjetoota deeggarsa namoomaa kennaniin ni qeeqama.
Eegdotni kun wayita lubbuu baraaran sarbama mirgoota namoomaa raawwatu jedhamuun himatamu.
Yeroo ammaa godaantotni 800,000 fi baqattootni galmaahanii kooluugaltummaa gaafatan 50,000 ta'an Liibiyaa keessatti argamu.
Ji'oota jalqabaa sadii bara kanatti baqattootnii fi godaantotni 15,900 galaana meditiraaniyaanii qaxxaamuruun Awrooppaa gahaniiru. Yeroo wal fakkaataa bara 2018 waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu 17% hiri'iseera.
Dhaabbata ''gahuumsa hin qabne''
UN fi dhaabbileen miti mootummaa biroon Liibiyaan bakka hojiif rakkistuu taate dha yoo jedhan, UNHCR ammoo mootummaa Liibiyaarraa beekamtii hin qabu.
Ragaaleen icitaawooniifi gabaasaleen hin maxxanfamne harka BBC galan, deeggarsa namoomaa kennuu fi keesumaa dhaabbilee miti mootummaa waliin hojechuurratti hojmaatni dhaabbatichaa dhibaa ta'u mul'isu.
''Gahuumsa dhabuu hanga kanaa argee hin beeku,'' jedhu Liibiyaa keessatti hojjetaa gargaarsa namoomaa kan ta'anii fi namni UNHCR waliin dhiyeenyatti hojjetaa turan tokko.
Erga bara 2014 Gamtaan Awrooppaa Liibiyaa keessatti godaantota akka Leeylaa fi Mohaammad gargaaruuf projeetii ooluuf karaa UN fi dhaabbilee miti mootummaa biroo doolaara miiliyoona 377 kenneera.
Odiitiin UNHCR kan ji'a shan dura bahe akka ibsuutii maallaqni seeraan to'atamaa akka hin turre mul'isa. Mallaqnii hangamii akka barbaachisuu fi waan jedhameef ooluufi dhiisuu hordofuurrattis dhaabbatichi hanqina qaba.
Bara 2018 irraa qabee arjoomtotni dhaabbatichaarratti hanqinoonni hojmaataa mudachuu beekisfamaniiru.
Dooniin godaantota feete qarqara galaanaa Xaaliyaan buufatte
Ergaan email ji'a darbe diploomaatotaa fi aangawoota Gamtaa Awrooppaaf ergamee, BBC'n argachuu danda'e tokko buufata godaantootaa Khoms jedhamutti haalli qabinsaa jiru daran hammaachuu, sarbamni mirga namoomaa heddumachuu, godaantootni badaa jiraachufi rakkoolee kaaniis ni eera.
Amma International Medical Corps fi dhaabbatni miti mootummaa biyya alaa biroon UNHCR fi IOM deebii kennuu diduu isaaniirraa kan ka'e hojii qaamolee kana lamaan waliin hojjetan addaan kutaniiru.
Godaantotni hedduun UNHCR deeggarsa fi hordoffii isaanii gochuu dhabuun biyya dhalootaa isaanittis deebi'uuf ykan gara biyya sadaffaatti ce'uuf danqamanii dararaa argaa akka jiran himu.
Abbaa Warraa ishee haala sukkaneessan kan dhabde Leeylaan amma buufata Mohaammad itti of ajjeese keessa gara kaampii UNHCR Nijeer jiruutti dabarfamteetti.
Somaaliyaatti deebi'uun ''murtee du'aa fudhachuudha'' kan jettu Leeylaan, waayeen hegeeree ishee akkuma bitaa isheetti galetti jirti.
24 Sadaasa 2017
Liibiyaa: Dararamni lammiilee Liibiyaatti argaman hanga yoomiitti?
12 Fuulbana 2017
Dooniin akka hin buufanne dhorkamee turus, godantoonni akka doonii irraa bu'an eeyyamameef
Sa'aatii dheeraaf nyaata bilcheessuun rekoordii haaraa
Xalayaan ganna 50 qaruuraa keessaa argame